Ihe Ị Ga-eme ma E Nwee Onye Gị na Ya Dị n’Ezigbo Mma | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Zulu
OTÚ O SI AMALITE
O nwere ike ịbụ na e nwere nwoke ihe na-adabara gị na ya. O nweghị ihe unu na-anaghị akọrọ ibe unu. N’obi gị, e nweghi ihe jikọrọ unu. Ma, ị makwa na obi agaghị adị di gị mma ma ọ nụ ihe gị na onye ahụ na-akparịta.
O nwere ike ịbụ na adịm ná mma unu agafela otú o kwesịrị nakwa na i kwesịrị ime ihe ozugbo ka ị ghara ịbanye ná nsogbu. Ma, ka anyị tụlegodị ihe nwere ike ịbụ ya mere ihe ji adabara unu.
IHE MERE GỊ NA YA JI DỊ N’EZIGBO MMA
Ọ na-eme gị obi ụtọ. Obi na-adị ụmụ nwaanyị ụtọ ma e nwee nwoke na-ajụ ha otú ha mere. Isi na-ebu ha ma a gwa ha na ha mara mma. Nwaanyị nọ na di nwere ike ya na nwoke ọzọ adịwa n’ezigbo mma n’ihi na obi na-eru ya ala ma ya na onye ahụ nọrọ. Ọ bụrụ na ọ bụ nwoke ọzọ na-eme ka obi ruo gị ala, marakwa na agwọ nọ n’akịrịka. Ọ bụrụ na gị na nwoke ọzọ dị n’ezigbo mma, ọ ga-eme ka obi gị ghara ịdịcha n’ebe di gị nọ. Ihe ọ pụtara bụ na ị gaghịzi ahụ di gị n’anya otú i kwesịrị i si hụ ya n’anya.
• Jụọ onwe gị, sị: ‘Gịnị ka onye a na-emere m nke di m na-agaghị emere m?’
Gị na di gị na-esekarị okwu. Baịbụl kwuru na ndị lụrụ di na nwunye “ga-enwe mkpagbu.” (1 Ndị Kọrịnt 7:28) Dị ka ihe atụ, o nwere ike ịdị gị ka di gị ọ̀ na-eleghara gị anya ma ọ bụ ya abụrụ na ị na-eburu ya iwe n’obi maka ihe o mere gị. O nwere ike ịbụ na di gị achọghị ikwu ihe ọ bụla banyere ihe ahụ, ya emezie ka ike gwụ gị, obi na-akakwa eru gị ala ma gị na nwoke ọzọ nọrọ. Ndị ọkachamara ụfọdụ na-ekwu na ọ bụrụ na di na nwunye edozighị ụmụ irighiri esemokwu ha nwere, ha ga na-esekarị okwu. Ihe ndị ahụ nwekwara ike ime ka ha gbaa alụkwaghịm.
• Jụọ onwe gị, sị: ‘È nwere ihe na-esere mụ na di m nke mere ka mụ na nwoke ọzọ dị n’ezigbo mma?’
Cheta na ọ baghị uru. Baịbụl kwuru, sị “Mmadụ ọ̀ pụrụ ịgụnye ọkụ n’obi ya, uwe ya aghara ire ọkụ?” (Ilu 6:27) Nke bụ́ eziokwu bụ na obi nwaanyị nọ na di ekwesịghị ịdị n’ebe nwoke ọzọ nọ. Obi ya dịrị n’ebe ọzọ, o nwere ike ịkpatara ya na di ya nsogbu. (Jems 1:14, 15) Ihe a na-ekwu abụghị naanị ihe nwere ike ime kama chegodị banyere ihe ndị merela eme. Cheta na obi gị adịchaghịzi n’ebe di gị nọ n’ihi na gị na nwoke ọzọ dị n’ezigbo mma.
Aghọgbula onwe gị. Ọ bụrụ na e nwere nwoke gị na ya dị n’ezigbo mma, i nwere ike ịna-eche na ụwa gaara akara gị mma ma a sị na ọ bụ ya na-alụ gị. Ma, o nwere ike ịbụ na i ji onye ahụ atụnyere di gị. Ị makwa na ime otú ahụ adịghị mma. Chetakwa na otú obi na-adị gị ma gị na nwoke ahụ nọrọ ka obi na-adịbu gị ma gị na di gị nọrọ. N’ihi ya, echela na nwoke ahụ ka di gị mma.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jeremaya 17:9.
Kpebie ihe ị ga-eme na ihe ị na-agaghị eme. E nwere ihe ụfọdụ ndị mmadụ na-etinye n’ụgbọala ha ma ọ bụ n’ụlọ ha ka ọ ga-abụ ndị ohi bịa, ihe ahụ emewe mkpọtụ. I nwere ike ime ụdị ihe ahụ ka o nyere gị aka ịma mgbe nsogbu bịawara. Baịbụl kwuru, sị: “Chebe obi gị.” (Ilu 4:23) Olee otú ị ga-esi chebe obi gị? Mee ihe ndị a:
Mee ka onye ọ bụla mara na ị lụọla di. I nwere ike idewe foto di gị n’ebe ị na-arụ ọrụ.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Jenesis 2:24.
Kpebie ihe ị ga-eme ma ọ bụ ihe ị ga-ekwu na ihe ị na-agaghị eme mgbe ọ bụla gị na nwoke ọzọ nọ. Dị ka ihe atụ, i kwesịghị ịgwa nwoke gị na ya dị ná mma banyere nsogbu ọ bụla gị na di gị nwere. Ọ bụrụ na e nwere nwoke gị na ya na-arụkọ ọrụ, i kwesịghịkwa iso ya na-aga atụrụ ndụ.
E nwee nwoke gị na ya dị n’ezigbo mma, gbaa mbọ ka ekele ghara ịgafe nku aka. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe gị omume, jụọ onwe gị ihe kpatara ya. Kama ị chọwa ihe ị ga-akụdo aka mere gị na ya ka ga-eji na-adị ná mma, gbalịa ka gị na di gị dịrị ná mma.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ilu 5:18, 19.
Ihe e kwuru n’isiokwu a gbasakwara ụmụ nwoke ndị lụrụla nwaanyị.
AMAOKWU BAỊBỤL NDỊ GA-ENYERE UNU AKA
“Obi dị aghụghọ karịa ihe ọ bụla ọzọ, o sikwara ike njite.”—Jeremaya 17:9.
‘Nwoke ga-arapara n’ahụ́ nwunye ya.’—Jenesis 2:24.
‘Ṅụrịa ọṅụ n’ihi nwunye ị lụrụ n’okorobịa. Ka ịhụnanya ya na-enye gị oké obi ụtọ mgbe niile.’—Ilu 5:18, 19.
Ọ̀ BỤ NAANỊ ADỊM NÁ MMA?
M̀ na-akọrọ ya nsogbu mụ na di m nwere?
M̀ na-agba mbọ ka mụ na ya na-anọ?
Di m ọ̀ ma na mụ na ya dị n’ezigbo mma?
Ahụ́ ọ̀ ga-eru m ala ma di m hụ mụ na ya?
Obi ọ̀ ga-adị di m mma ma ọ nụ ihe mụ na onye a na-akpa?
Otú Anyị Si Emeso Ndị Ọzọ Udo na Obi ụtọ Alụmdi na Nwunye Alụmdi na Nwunye na Ezinụlọ